Ntọala Njikwa Nne na Nna na iPad, iPod Touch, ma ọ bụ iPhone
Weebụ & Chọọ Nchedo & Nzuzo
Otu esi edozi Njikwa Nne na Nna na iPad, iPod Touch, ma ọ bụ iPhone
Nanị ihe ọ bụla ụmụaka nọ na mbara ala yiri ka ha nwere iPod Touch, iPad, ma ọ bụ iPhone. Ọ bụrụ na ha enweghị otu, ohere bụ na ha na-agbaziri nke gị ma na-enweta ha obere graw prints niile na ya na ihuenyo.
Dị ka ndị nne na nna, anyị na-elekarị ngwaọrụ ndị a anya karịa usoro egwuregwu ma ọ bụ egwu egwu. Anyị tolitere na oge mgbe otu ọkpụkpọ CD bụ ọkpụkpọ CD. Anyị anaghị atụgharị uche mgbe niile na eziokwu ndị a bụ IGadget bụ ndị na-egbuke egbuke bụ ihe dịka otu mma agha Switzerland. Ha nwere ihe nchọgharị intaneti zuru ezu, ọkpụkpọ vidiyo, njikọ Wi-Fi , igwefoto, na ngwa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla i nwere ike iche n'echiche. Oh, ha, ha na-egwu egwu kwa (dika MTV jiri).
Kedu ihe nne na nna ga - eme? Kedu ka anyị ga - esi gbochi obere Johnny site na ịzụta ngwa ọ bụla na ngwa ngwa anyị na kaadị akwụmụgwọ anyị, ileta weebụsaịtị raunchy, na ịgbazite ihe nkiri ọjọọ / egwu / enweghị mmasị?
O di nwute, Apple nwere nlekota anya iji gbakwunye nke oma nke ndi nne na nna na iPod Touch, iPad, na iPhone.
Nke a bụ ngwa ngwa na unyi na esi edozi njikwa nna na nwa gị iPhone, iPod Touch, ma ọ bụ iPad. Ụmụaka mara mma ma nwee ike ịchọpụta ụzọ dị iche iche na ntọala ndị a, ma ọ dịkarịa ala, ị mere ihe kachasị mma iji gbalịa ma gbochie ndị na-eme nkata.
Njikwa nke nne na nna na-adabere na gị iji mee ka mgbochi ma tinye nọmba PIN ị na-ezo.
Iji mee ka mgbochi, metụ akara ntọala na ngwaọrụ iOS gị, họrọ "General", wee metụ "Mgbochi".
Na "Mgbochi" peeji nke, họrọ "Kwado Ibechi". Ugbu a, a ga-akpali gị ịtọ nọmba PIN nke ị ga-achọ icheta na ịhapụ ụmụ gị. A ga-eji nọmba PIN a maka mgbanwe ọ bụla ị ga-achọ ime ka mmachibido nke ị setịpụrụ.
Tụlee ịhapụ Safari na ngwa ndị ọzọ
N'okpuru ebe a na-enye ohere, ị nwere ike ịhọrọ ma ịchọrọ ka nwa gị nwee ike ịnweta ngwa ụfọdụ dị ka Safari ( ihe nchọgharị weebụ ), Youtube, FaceTime (nkata vidiyo), na ọtụtụ ndị ọzọ nke Apple rụrụ. ngwa. Ọ bụrụ na ịchọghị ka nwatakịrị nwee ohere ịnweta ngwa ndị a, dozie mgbanwe na ọnọdụ "OFF". I nwekwara ike gbanyụọ njedebe ọnọdụ na-akọ akụkọ iji gbochie nwa gị ka ọ na-ebipụta ọnọdụ ha ugbu a na ngwa dị ka Facebook.
Debe Ọdịnaya Ọdịnaya
Dị nnọọ ka V-Chip na-egosi na ọtụtụ TV ndị oge a, Apple na-enye gị ohere ịmepụta ókè ụdị ọdịnaya ịchọrọ ka nwa gị nweta. Ịnwere ike ịtọzi ọkwa elekere a na-enye ikike site na itinye nlele na ọkwa ọkwa ọkwa kachasị elu ị chọrọ ka ha hụ (ya bụ G, PG, PG-13, R, ma ọ bụ NC-17). Ị nwekwara ike ịtọ ntọala maka ọdịnaya TV (TV-Y, TV-PG, TV-14, wdg) na otu aka maka ngwa na egwu.
Iji gbanwee ogo ọdịnaya, họrọ "Egwú na Podcasts", "Movies", " TV Shows ", ma ọ bụ "Ngwa" na mpaghara "Hapụrụ Anwụrụ." Ma họrọ ọkwa ịchọrọ ikwe.
Gbanyụọ & # 34; Wụnye égwu & # 34;
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime anyị hụrụ ngwa ngwa ngwa ngwa, ha abụghị maka onye ọ bụla. Ọ dịghị onye chọrọ ịnọ na nzukọ dị mkpa ma nwee "atụmatụ" ị ga-apụ na obere Johnny setup mgbe ọ na-arụnyere Super Ultra Fart Machine ngwa na iPhone ha n'abalị gara aga. Ị nwere ike igbochi nke a site na ịmepụta "Wụnye ngwa ngwa" na "nkwụsị" ọnọdụ. Ị ka nwere ike ịwụnye mgbakwunye, ị ga-achọ ịbanye nọmba PIN gị tupu i mee ya.
Gbanyụọ Ngwaahịa In-ngwa
Ọtụtụ ngwa ngwa na-ekwe ka ịzụta ihe ngwa ahịa ebe a pụrụ ịzụta ngwongwo dị iche iche na ego ụwa. Little Johnny nwere ike ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị aghọta na ọ na-eme ka akụ gị na-akwụ ụgwọ maka "Ike Eagle" ọ zụtara n'oge Angry Birds App. Ọ bụrụ na ị gbanyụọ ịzụta ngwa-azụ ị nwere ike ọ dịkarịa ala na-eku ume na-erughị ala nke na nwa gị agaghị aga nnụnụ ịzụrụ ịzụ ahịa n'ahịa gị.
Ụmụaka na-ahụchasị nke ọma na ọ ga-abụkwa ụzọ ha ga-esi gbochie mgbochi ndị a. Eziokwu ahụ bụ na nanị mmachi PIN naanị 4 digit adịghị enyere aka. Ọ bụ naanị oge tupu ha echee ihe ziri ezi, ma ọ dịkarịa ala, ị gbalịsiri ike ịnwa ma chebe ha. Ma eleghị anya, ha ga-ekele gị otu ụbọchị mgbe ha nwere ụmụ nke aka ha.
Ihe mere i ji kwesị ịkpachara anya dị ka / pịa nghọgbu
Chebe profaịlụ Facebook gị na 6 Nzọụkwụ Nzọụkwụ
5 Hacks hụrụ na Movies nke zuru ezu Legit
Ndi Ransomware na-ejide nlekota komputa gi?
Na Google Nledo Na m? Nke a bụ otu esi echebe onwe gị
Kedu ihe bụ ozi Emmanuel?
Cyber ​​Crime - Gịnị Ka Ọ Bụ?
Esi gbanyụọ iPhone gị
7th Ọgbọ iPod nano Review
Nkọwa nke ụgwọ ụgwọ data
Otu esi emepụta akaụntụ njirimara ọhụrụ na Windows 7
Kedu ụdị mpempe akwụkwọ mpụta?
LinkedIn: Otu esi edebanye ma mepụta profaịlụ
Olee otú iji bipụta ihe e dere na ihe osise
Jiri ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Windows keyboard
3 Ụzọ iji nweta Akụkọ sitere na Chatbot na gị iPhone
Kedu ihe bụ DNG Njikwa?
Ntak emi Twitter? Ụzọ nke Ndị Amalite Mmalite Ga-amalite
5 Ihe na-eme ka iPhone 6S na 6S dị iche
Nweta Email AOL Iji Email Apple
Gịnị Ka Oge 'Interweb' pụtara?
Ònye Bụ Jekọb Jekọb?
Otu esi enweta WiFi Igbe Mbata IMAP na Mozilla Thunderbird
Atụmatụ ịhọrọ, Wụnye, na Jikọọ Nkwupụta n'èzí
Esi gbanwee URL gị na bụla isi Social Network
Kedu ihe Google Play?
ELM327 Njikọ Njikọ Nyocha Bluetooth